Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba eGrisi » I-UNWTO neGrisi ukuseka iziko lophando lokhenketho lwaselwandle lokuqala
Ukhenketho lwaselunxwemeni naseLwandle lolunye lwezona zinto zibalulekileyo eziqhuba kwezoqoqosho kulwandle lweMeditera.
Iziko elitsha lokujonga liya kusekelwa kwiYunivesithi yaseAegean eGrisi
I-arhente yeZizwe eziManyeneyo kunye ne-Ofisi yoMphathiswa Wezokhenketho bayiqinisekisile intsebenziswano yabo kweli nyathelo
I-CLIA ikwaxhasa uphando kunye nokujonga iziko le-UNWTO kuzinzo nakukhenketho lwaselwandle kunxweme lweMeditera
I-UNWTO kukusebenzisana noMphathiswa Wezokhenketho waseGrisi ekumiseni isikhululo sokuqala sophando esizinikele ekulinganiseni uphuhliso oluzinzileyo lokhenketho lwaselunxwemeni nolwandle kwiMeditera yonke.
Iziko elitsha lokubeka esweni liya kusekelwa kwiYunivesithi yaseAegean eGrisi. Ukusuka apha, iingcali ziya kubamba kwaye ziqokelele imilinganiselo yedatha kunye nohlalutyo olunxulumene nokusingqongileyo, uqoqosho, kunye nefuthe kwezokhenketho.
Ukhenketho lwaselunxwemeni naseLwandle lolunye lwezona zinto zibalulekileyo eziqhuba kwezoqoqosho kulwandle lweMeditera. Iziko elitsha lophando linokubonelela ngedatha ephambili ukukhokela ukuqala ngokutsha kunye nophuhliso lwecandelo elizayo, liqinisekisa ukuba lizalisekisa amandla alo okubonelela ngamathuba kuluntu lwaselunxwemeni nokukhusela nokubhiyozela ilifa lemveli nendalo.
I-Arhente yeZizwe eziManyeneyo kunye ne-Ofisi yoMphathiswa Wezokhenketho baqinisekisile ukusebenzisana kwabo kweli phulo I-UNWTO INkomfa ekuMgangatho oPhakamileyo yoKhenketho lwaselunxwemeni naseLwandle, ebibanjelwe e-Athene yaza yabanjwa ngokubambisana yi-Cruise Lines International Association (i-CLIA) kunye nee-Cruises zoSaziwayo.
UMphathiswa wezoKhenketho waseGrisi uHarry Theoharis uthe: “Ndivakalisa umbulelo wam omkhulu ngenkxaso ye-UNWTO kule nzame. Kungekudala iZiko loPhando liza kuba sisalathiso ekufundweni nasekukhuseleni amanxweme ethu. ”
UPierfrancesco Vago, uSihlalo weHlabathi we-CLIA kunye noSihlalo oLawulayo weMSC Cruises wongeze wathi: “I-CLIA iyakuvuyela ukuxhasa uphando kunye nokujonga iziko le-UNWTO kuzinzo nokhenketho lwaselwandle kunxweme lweMeditera. Njengenxalenye yokuzibophelela kweshishini lokuhamba ngenqanawa kuhambo olunenkathalo, silandela ukuhamba ngeekhabhoni eYurophu ngo-2050, kwaye sisebenza ngokusondeleyo neendawo zokuhamba ngenqanawa kunye noluntu oluselunxwemeni ukuxhasa ukukhula kwezoqoqosho ngendlela ezinzileyo.
Iindaba zesikhululo senqwelomoya
Isibheno seLondon Heathrow sibhenela kuBaphathiswa be-G7: Vula iZibhakabhaka zethu!